ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသော နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် quarantine ဝင်ရန် ဖိလစ်ပိုင်ပယ်ဖျက်ပေး - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Pasay မြို့၊ Ninoy Aquino အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၌ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသည့် ခရီးသည်များအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ် ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မနီလာ၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ကူးစက်မှုနည်းသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံ နှင့်ဒေသ ၄၀ ကျော်မှ ခရီးသွားများအနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးပါက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ရာတွင် quarantine လိုအပ်ချက်အား ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Harry Roque က အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင်ပြောသည်။
အစိမ်းရောင်စာရင်းတွင် ပါဝင်သော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံနှင့် ဒေသများမှ ခရီးသွားများအတွက် ကျင့်သုံးမည့်စည်းမျဉ်းသစ်သည် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ သက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း Roque ကဆိုသည်။
အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ မထွက်ခွါမီ ၇၂ နာရီအတွင်း ပိုးမရှိကြောင်း RT-PCR စစ်ဆေးချက် အားလိုအပ်ကြောင်း Roque ကဆိုသည်။ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် ၎င်းခရီးသွားများအနေဖြင့် quarantine ဝင်ရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း သို့သော်ခရီးသွားများအနေဖြင့် ၁၄ ရက်မတိုင်မီ မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမဆို မိမိဘာသာဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသူများ ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူများနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းကို သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသူများနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီး ခရီးမသွားမီလိုအပ်သော ဆေးစစ်မှု မပြုလုပ်ထားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် ၅ရက်မြောက်တွင် ပိုးမရှိကြောင်း RT-PCR စစ်ဆေးမှုမရမချင်း quarantine ဌာနတွင် သီးခြားနေထိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု Roque က ဆိုသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် အသွားအလာကန့်သတ်ချက် lockdown ချမှတ်ချိန်ကတည်းက နယ်စပ်အကာအကွယ်အစီအမံများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားခဲ့သည်။ သံတမန်များအပါအဝင်အထူးဗီဇာရရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုသာဝင်ခွင့်ပြုကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MANILA, Oct. 15 (Xinhua) — The Philippines has lifted the quarantine requirement for fully vaccinated travelers arriving from China and over 40 other countries and regions with low number of COVID-19 infections, presidential spokesperson Harry Roque said on Friday.
Foreign tourists are still barred from entering the Philippines as part of the border measures when the government imposed lockdown restrictions in March 2020. Only those foreigners granted special visas, including diplomats, are allowed to enter. Enditem